'Gehenna: Kune Rufu Kunorarama' - Indie Horror Movie inoitika Inoshanda Mhedzisiro Nyanzvi - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Gehenna: Kune Rufu Kunorarama' - Indie Horror Movie iri Inoshanda Mhedzisiro Mifananidzo
'Gehenna: Kune Rufu Kunorarama' - Indie Horror Movie iri Inoshanda Mhedzisiro Mifananidzo
by arun March 26, 2015
by arun March 26, 2015 636 maonero
Iwe unofanirwa kuona izvi! Sezvo ini ndanga ndichiuraya nguva ndichiita yangu yevhiki scroll yaKickstarter (KS) maziso angu akabva amira pane chirongwa chinonzi GEHENNA: Kunogara Rufu. Pamwe waive mufananidzo unotyisa wechisikwa chine humanoid, kana iwo mazwi anoshandiswa mumataurirwo ekutanga akabata kufarira kwangu, handina chokwadi. Izvo zvaive pachena kwandiri kubva pakuenda-kuenda, ndeyekuti iyi haisi yako yakajairwa KS chirongwa.
Pano pamahofisi eHorror.com, chikwata chinokurukura mapurojekiti matsva-anobhadharwa nevanhu kwenguva yakareba zuva nezuva. Kunyanya nekuda kwekuti kutyisa rudzi rwakakurumbira mukati meaya madenderedzwa uye mushure mezvese ivo vanotipa isu mafirimu senge Babadook. Nehurombo, kune akawanda madhiri pane akati nharaunda dzisingambofi dzakazadzikiswa. Asi ndinotenda GEHENNA: Kunogara Rufu ichaita mucherechedzo wayo munyika inotyisa. Iwo makuru epamabhizimusi mahombe asina kumbobvira anetsekana nezvemurume mudiki anofanirwa kutarisisa kune ino-uye-inouya kubatanidzwa kwevagadziri vemamuvhi.
Uropi hweshure kwezvose ndiHiroshi Katagiri (mufananidzo uri pamusoro) uye ndiye ngano mune zvinoshanda nyika mhedzisiro; kubatanidza kuveza, kugadzira, uye zvekare pa - screen mhedzisiro kuti uwane "mutengesi kupfuura chaiye" mhedzisiro. Katagiri, achinge akashanda seakasarudzika murume pane mafirimu akadai se The Hunger Games uye Kabhini musango (ona mufananidzo uri pamusoro), uye kukwiza magokora nengano saSteven Spielberg, anonzwa zviri pachena kuti inguva yake yekutora chigaro aratidze vezera rake kuti zvinoitwa sei. Tarisa uone yake IMDb pano.
Kuverenga ndichienderera mberi muchirongwa cheprojekti paKS, ndakafadzwa nerimwe dombo diki. Zviripachena GEHENNA: Kunogara Rufu Iyo inotyisa bhaisikopo ine yakakura inoshanda mhedzisiro - zvinoreva zvisikwa zveimwe mhando, uye ndiani nani kuve nehunhu hwechisikwa chakadai? Hapana mumwe kunze kwe Doug Jones! Ini ndiri fan guru rebasa raDoug uye kana iwe usingazive wandiri kureva, nyara iwe, sezvo iwe uine chokwadi chekuti gehena ingadai yakaona chisikwa chaakatamba. Ari mukati Pan's Labyrinth, Hellboy, Anoshamisa Makumi, Varume muBlack 2, uye rondedzero inoenderera.
(Mufananidzo uri pamusoro ndiMike Elizalde, muridzi weSpectral Motion, ari kushanda panaJones seThe Creepy Old Man, sekutarisa kwaHiroshi. Mike naSpectral Motion vese vari mubhodhi nefirimu.)
Chekupedzisira, zano reiyi firimu rinonzwika rekutanga, kwete kutenderera pane chimwe chinhu chatakaona kare. Kana iwe ukatarisa pamapeji ehupenyu hwaHiroshi, anonyatsobata pane izvo zvinogadzira bhaisikopo rakanaka uye sezvakakosha izvo zvinoita kuti zvityise. Uye iye akajeka pane iyo pfungwa yekuti HAUFANANWE nekuwedzeredza gore uye hunhu kutyisidzira vanhu, pachinzvimbo, iwe unonyudza vateereri vako mune iyo nyaya nekushandisa kwetsika nzira; zvinotyisa zvinouya kubva mukukwanisa kwake kuunza zvisikwa zvake kuhupenyu nezvazvinoita, kwete zvemakomputa.
Ini pachangu, mushure mekuverenga iyo info pane iyo Kickstarter peji ini ndinofara kuona izvo zvakagadzirwa nezve iyi purojekiti. Nemazana mashoma ekutsigira atova handina mubvunzo kuti ichazadzisa chinangwa chayo. Kana iwe uchida kuve chikamu chaHiroshi uye nekusikwa kwechikwata, tora mbongoro yako uende ku KS peji uye kudzorera chirongwa. Iwe unogona kunyange kutora chivezwa chemusoro wako wega chakaitwa pachezvake naHiroshi pachake.